राजनीतिमा भुईचालो गएको दिन - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
कार्की विरुद्धको महाअभियोगमा कांग्रेसले देखायो आफ्नो असली चरित्र
बिडम्बना आज देशमा प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी सांसदले व्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक आइजीपी नियुक्ति प्रकरणको मुद्दा फैसला गर्दा कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेकोलगायत विभिन्न आरोपमा उनीमाथि महाअभियोग लगाइएको छ । आजै कार्कीको निलम्बनको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइयो । यो बिषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावलाई अधिनायकवादी शासनको पूर्वअभ्यास भनेको छ । एमालेले महाअभियोग प्रस्तावलाई ससदमा असफल बनाउने दाबी गरेको छ ।उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग आपत्तिजनक भएको बताउनुभएको छ । थापाले महाअभियोग न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आक्रमण भएको सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर मार्फत प्रतिक्रया दिनुभयो ।
पुरानो राजसंस्था हटाएर,राजालाई फाले तर,सबैको कोसीस,आफै राजा बन्ने,अनि परिणाम, उहाँको दावी छ । यस्तै काकीविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव पछि गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले राजिनामा दिनु भएको छ । भगवान होईन यो देशमा के हुन लागेको हो ? आफ्नो अनुकुल काम नगर्ने सवैलाई यस्तै गर । थुक्क सतीले सरापेको देशका सण्ड मुण्डहरु । पुलिस विगार्यौ, सेना विगार्न खोजेका थियौ सकेनौ अव न्यायालय वांकी थियो त्यो पनि सक्ने भयौं । बलिको बोको रुपमा भाईहरु प्रस्तावक काँग्रेस र माओवादी केन्द्रमा अरु यस्ता हिक्मतवाला संसद रहेनछ भन्ने कुरा बुझियो ।
निर्णय हेर्दा निर्णयकर्तालाई रेविज लागेको कुकुरले पक्कै टोकेको हुनुपर्छ। अब जनतालाई टोक्न आउनेवाला छन् जोगिऔं। लोकमानले तेत्रो गर्दा पनि काँग्रेसले महाअभियोग लगाउँन मानेन तर अहिले प्रधानन्यायाधीस सुशिला कार्की माथि लगाएछ । यो देसको सबैभन्दा ठुलो शत्रु को रहेछ अब जनताले चिने । गल्ती लाई पनी सही भनेर सहि गर्नुपर्ने थियो सुसिला कार्कीले कि भाइरसले जे भने पनी मान्नु पर्दथ्यो । बादरसंग जंगलमा हुर्केको मान्छे त्यसलाई भाड्न मान्छे मार्न र जनतालाई अन्धकारमा राख्न बाहेक राम्रो काम गर्न आउदैन किनकि जग जस्तो हुन्छ । त्यसको पात हल्लिन पनि गारो हुन्छ ।
यो राष्ट्रको सेना प्रमुख, प्रहरी प्रमुख र न्यायालय प्रमुख हुनलाई कति कार्य कुशलता र योग्यता हुनु पर्छ भन्ने यो सरकारलाई थाहा छ ? राजनीति जस्तै ठान्या होला खुल्ला मन्चमा २,४ जनाको अगाडी भाषण गरेर हुने जस्तो ? जुन कुरामा हात हाल्यो त्यही विवाद हुने यो एकदमै घटिया र नालायक सरकार हो । अब प्रचण्ड सरकारले खुरुक्कन राजिनामा दिएर सरकार छाड्ने वा सहमति अनुसार देउवालाई बुझाउने काम गर्दा हुने भो ? अन्यथा चुनाव भनेर आयु लम्ब्याउने काम नगरौ । यस्ता झिना मसिना कारण देखाएर सर्वोच्च न्यायलय र गरिमामय पदको उपहास गर्ने नेताहरु भोली प्रमाणित नभएमा आजिवन मानहानी को मुद्दा त खेप्नु नै पर्ने छ तर त्यो भन्दा पहिला जनता को प्रहार रोक्ने सामर्थ्य जुटाएर देखाओ ।अचेल नेपालको भौगोलिक अखण्डता बिरुद्धका घटना देखि आन्तरिक मामिलामा बेदेशी हस्तक्षेप लगाएतका जे जस्ता राजनीतिक घटना भइरहेका छन, यसले सैनिक कु निम्त्याउन लागेको हो ?